Lakkoobsi Namoota Vaayiresii Koronaan Du’an Ameerikaa Keessaa Kuma Shan Guute
Ebla 02, 2020
Yunaayitid Isteetis keessaa lakkoobsi namoota vaayiresii koronaan du’anii kuma shan darbee ennaa jiru kanatti kantiibaan magaalaa guddittii lammaffaa Ameerikaa LA uummati ennaa ala ba’u funyaanii fi afaan akka haguggatu ykn mask kaayyatu gaafataniiru.
Eriik Gareeti akka jedhanitti uummati maaskii ogeessota fayyaafuu hanqatee jiru fayyadamuu dhiisanii kan hucuu irraa hojjetametti gargaaramuun vaayiresii kana xiqqeessuuf gargaara jedhan.
Angawoonni federaalaa hanga ammaatti uummati maaskii akka godhatu yaada hin dhiyeessine. Gaarseetiin akka jedhanitti maaskii kaayyachuu jechuun namoonni akkuma tasaa mana keessaa haa ba’an jechuu miti jedhanii, kan gad ba’uu danda’an waan barbaachisu kan akka nyaataa bitachuu qofaaf jedhan.
Daayrikterri jarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedroos Adhaanoom weerarri kun hammaachuun hedduu na yaaddesse jedhan. Biyyoota hiyyeeyyii ta’aniif uummata vaayiresii kanaaf saaxilamoo ta’an kanneen akka gad hin baane ugguraman dhiibbaa isaan irra jiru hedduu dha jedhanii, biyyooti guddatan deggersa akka godhan gaafataniiru.
Waaltaan ittisa fi to’annoo dhukkuobtaa kan US kaleessa akka akeekkachiisetti mallattoon isaa irratti hin argaminuu malee eenuyu iyyuu vaayiresiin koronaa qaama isaa keessa jiraachuu mala jedhee jira.
Qorannaa Singaapoor keessatti geggeessameen vaayiresiin kun dhibba irraa harki kudhan namoota mallattoo dhukkubaa irratti hin argamneen faca’e. kanaaf jecha wal irraa hiiqiinsi hawaasummaa dirqama jedhee jira waaltaan kun.
Prezidaant Doonaald Traamp Wal Irraa Hiiqiinsa Hawaasummaa Guutuu Biyyaa Fudhatama Dhabsiisan
Prezidaant Doonaald Traamp guutummaa biyyaatti manaa ba’uun akka dhorkamu isa jedhu kaleessa fudhatama dhabsiisuu dhaan,xayyaaronni naannolee vaayiresiin koronaa itti hammaatetti akka hin balaliin dhorkuu kan malan ta’uu beeksisan.
Mootummaan US qajeelfamni wal irraa hiiqiinsi hawaasummaa ykn namootaa cimee hojii irra oolu iyyuu namoonni nuusa miliyoonaa ta’an vaayiresii koronaan du’uu malu jedhee jira